काबिलमा दृष्टिबिहिन हुन के गरे ऋतिकले ? ऋतिकलाई ६ प्रश्न - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
काबिलमा दृष्टिबिहिन हुन के गरे ऋतिकले ? ऋतिकलाई ६ प्रश्न
बलिउड अभिनेता ऋतिक रोशनको सिनेमा काबिल यहि जनवरी २५ मा रिलिज हुँदैछ । सिनेमामा ऋतिक दृष्टिबिहिन रोहन भट्नागरको भूमिकामा छन् । काबिल प्रमोशनका क्रममा ऋतिकसँग एजेन्सीले गरेको कुराकानी आज हामीले जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरेका छौँ ।
के तपाईँ २०१६ लाई बिर्सन सक्नुहुन्छ ? यहि बर्ष तपाईँको कंगना रनावतसँग विवाद भयो अनि सिनेमा माहेन्जो दारो पनि असफल भयो ।
म यो बर्षलाई बिर्सन सक्दिन । यो बर्ष मेरो जीवनकै यादगार बर्षको रुपमा रहनेछ । मलाई लाग्छ समस्याहरुबाटै हाम्रो उन्नती हुन्छ । जब हामी जिममा हुन्छौँ मसल्स बनाउँछौँ । त्यहाँ हामीलाई धेरै तौल भएका सामानहरु उचाल्नु पर्ने हुन्छ । कठिनाई र संघर्ष भनेको जिममा आफूलाई मेंटेन गर्नुजस्तै लाग्छ । यस्ता कुराहरुले दिमागलाई झनै मजबुत बनाईदिन्छन् । दिमाग लगातार त्यसबाट बाहिर आउने प्रयासमा हुन्छ र आफ्ना पूराना अुनुभवहरुबाट धेरै कुरा सिक्छ ।
तपाईँ र अक्षय कुमार बाहेक बलिउडमा अरु कोही स्टार छन् भने ति हुन् खान । के तपाईँलाई लाग्दैन बलिउडमा सुपरस्टारको कन्सेप्ट सकिँदै छ भन्ने ?
मलाई यसबारेमा थाहा छैन र मैलै कहिल्यै सोचेको पनि छैन । मलाई लाग्छ सुपरस्टारको कन्सेप्ट सकिने बित्तिकै बलिउडको लागि राम्रो हुन्छ । यसले फिल्म निर्माताहरुलाई नयाँ–नयाँ अनुहार ल्याउने मौका दिन्छ । निर्माताहलाई चार पाँचवटा स्टारहरुमा मात्रै सिमित रहनु पर्दैन । बलिउडलाई दुई चार जना सुपरस्टारले मात्रै पुग्दैन । यदि तपाईँ हलिउड स्टारहरुको कुरा गर्नुहुन्छ भने गन्दा गन्दै थाक्नुहुन्छ । स्टार सिस्टममा सबै कलाकारहरु ठूलो स्टारसँग काम गर्न चाहन्छन् र नयाँका लागि स्कोप हुँदैन । यति मात्रै हैन राम्रो स्क्रिप्ट पनि ठूला स्टारहरुलाई नै दिईन्छ ।
तपाईँको बुवा राकेश रोशन काममा निकै पञ्चुअल हुनुहुन्छ । तपाईँले कहिल्यै उहाँबाट गाली खानु भएको छ कि छैन ?
मैलै उहाँबाट कामको मामिलामा गाली त खाएको छैन तर फोन भने आएको छ । अहिलेसम्म यस्तो दुई पटक भएको छ । म सेटमा पुगेको थिएन, बाटोमा थिएँ । उहाँको फोन आयो र सोध्नु भयो, कहाँ हो तिमी ? मैलै उहाँलाई तपाईँकै काम गर्दा ढिला भयो भनेर टारिदिएँ ।
दृष्टिबिहिन मानिसहरुलाई भेटेपछि र योे फिल्ममा काम गरिसकेपछि तपाईँमा कसैलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने सोच आयो की आएन ?
यदि कोही दृष्टिबिहिन देख्न सक्ने भयो भने उसको लागि यो भन्दा राम्रो र ठूलो कुरा अरु छैन । काम गरिसकेपछि मेरो दिमागमा पनि यहि कुरा घुमिरहेको थियो ।
यो बर्ष तपाईँ पर्दामा दृष्टिबिहिनको भूमिकामा आउँदै हुनुहुन्छ । यसको लागि के–के कठिनाईहरुको सामना गर्नुपर्यो ?
सिनेमामा दृष्टिबिहिन रोहनको भूमिका निभाउन मलाई त्यति सहज थिएन । यसको लागि मैलै धेरै दृष्टिबिहिन मानिसहरुको बारेमा खोजी गरेँ । उनीहरुलाई भेटेँ । कुराकानी गरेँ । उनीहरुको जीवनशैलीबारे बुझेँ । सिनेमामा दृष्टिबिहिनको भूमिका निभाउनको लागि निकै मेहन गरेँ मैले । सिनेमामा मलाई एक्शन र डान्स पनि गर्नु थियो । त्यसकारण असहज त भयो नै ।
तपाईँले सिनेमामा दृष्टिबिहिनको भूमिका निभाउनको लागि कुनै फिल्म हेर्नुभयो ?
मैलै यसको लागि अल पचिनो स्टारर हलिउड फिल्म सेंट अप अ वुमन १९९२ हेरेको छु । सिनेमा मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो । मैलै यो सिनेमामाबाट धेरै कुरा सिकेको छु ।